Faallooyinka iyo Saadaalinta | Martech Zone
Faallooyinka iyo Saadaalinta
Isniin, Disembar 18, 2006 Khamiis, Juun 11, 2009 Douglas Karr
ProBlogger wuxuu leeyahay Mashruuc kale oo Qoraal Qoraal ah. (Adiguna waad ka qaybqaadan kartaa!)
Darren wuxuu aad u jecel yahay inuu yeesho tababare shaqsiyeed blogga. Marar dhif ah ayaan ku arkaa qoraal ku saabsan ProBlogger taasi gabi ahaanba asal maaha Waxaan u maleynayaa in Darren uu sameeyay dadaal aan caadi aheyn si uu u wanaajiyo boggaga internetka oo dhan.
Mashruucan Qoraalka Kooxdu waa inuu la yimaadaa liistada hal-abuurka ah, qaylada, iwm ee dib u eegista sanadkii hore ama saadaalinta sannadka soo socda. Waxaan go'aansaday inaan hal-abuur yar yaraado oo aan isku dayo labadaba isku dhafan. Hoos waxaad kaheleysaa dib-u-eegiddayda shaqsiyeed wixii 2006dii fiicnaa iyo fikirradayda wixii fiicnaan lahaa 2007. Isha ku hay saadaasha 2007, waxaan u maleynayaa inaan qabtay shaqo aad ufiican oo diiwaan galinta meelaha kala duwan. blog-ka ayaa taabanaya oo si dhab ah uga fekeraya jihada mid kasta oo ka mid ah mowduucyada ay qaadayaan.
Ku raaxayso! Sida had iyo jeer, faallooyinka waa la soo dhaweynayaa. Hubina inaad la socotid ProBlogger markaa waad iska hubin kartaa waxa dadka kale ay qorayaan.
Kombiyuutarka OS Mods
Intel Mac oo wata XP
Intel PC oo leh OSX
Mawduuc ku saleysan
Dabeecad ku saleysan
Xeelado isku dhafan w / Email Web
Adeeg Bixiyeyaasha Codsiga
Macmiil-Macaamiil Net ah
Wax Ka Beddel-Meel
Server Server Virtual
TV-ga dhabta ah
Mavericks ee Shaqada: Yaa Shaqaalaynaya?
Ku raaxeyso Flash
19, 2006 at 1: 23 AM
Waan ku raacsanahay inta badan saadaalintaada Doug, in kasta oo aanan u arkin Zune oo saamayn badan ku leh suuqa ciyaartoyda warbaahinta. Waxaan qoray liistadayda gaarka ah ee saadaasha mashruuca qorista kooxda.
Nasiib wacan saadaashaadii ugu dambeysay 🙂
19, 2006 at 9: 44 AM
Xaqiiqdii waxaan ku baxay addin ku yaal Zune! Gaar ahaan markaan iibsaday qaar ka mid ah iPod-yada loogu talagalay carruurtayda Kirismaska. Waa dhererkeygii dherer.
Waad ku mahadsantahay nasiibka, waan u baahanahay! Ogow muuqaal kasta oo weyn oo raadinaya 25-30 sano jir milyaneer ah oo jecel aabayaasha waaweyn ee keligood ah ee jecel inay wax ku qoraan dhammaan waqtiyada firaaqada
19, 2006 at 11: 30 AM
Maya, laakiin haddii aan wax ka helo, waan hubaa inaan jidkaaga u dirayo 🙂
19, 2006 at 12: 01 PM
Oh, waa maxay habka ugu fiican ee loo dhajiyo saadaasha, waan jeclahay! Xuduudaha waxay u baahan yihiin inay hoos u dhigaan qiimaha oo ay bixiyaan ikhtiyaarro badan oo khadka tooska ah ah, oo ay ku jiraan qaybta suuqa loo isticmaalo sida Amazon, si ay xitaa ugu dhowaato inay taabato taas.
Waxaan sidoo kale kaqeyb qaadanay mashruucan, joogso hadaad fursad hesho!
19, 2006 at 9: 10 PM
Mid ka mid ah isbarbardhigyadii ugu wanaagsanaa ee aan soo arkay ilaa iyo hadda iyo saadaal wanaagsan.Boggaaga ayaa hadda la daawaday lol.
Aniguba waan kaqeyb galay tartankii thius.waxaan sugaya darren si uu ugu dhigo booskiisa xiga
Waxaan quudinayaa bartaada
19, 2006 at 9: 22 PM
Mahadsanid, Mama Duck! Mahadsanid Ashish!
19, 2006 at 10: 15 PM
Ha iloobin inaad hubiso liiskan dhamaadka 2007 🙂
20, 2006 at 12: 00 AM
Waa inaad i xasuusisaa. Xusuustaydu sidaa uma sii dheeraato. 😉
20, 2006 at 7: 00 AM
Saadaalin fiican nin… iyo blog weyn ..
20, 2006 at 10: 21 AM
Mahadsanid, Madhur! Faallo celinta noocaas ah ayaa igu sii socota!
21, 2006 at 10: 26 AM
Hab wanaagsan oo loo maro saadaalinta.
Kormeerayaasha Wide - yep, horeyba way u arkeen.
Zune - Hmmm, Waxaan joogaa barta ugu sarreysa ee iibsiga mid.
28, 2006 at 3: 40 PM
Madadaalo in la arko in iPod lagu beddelay Zunes, sida Windows XP ay u wareejiso Mac OSX.
Xaqiiqdii ma arki karo waxa ugu horreeya ee dhacaya (iyo heer kasta oo aan dhakhso u ahayn), laakiin dhab ahaantii waxaan rajeynayaa kan labaad inuu run noqdo.
(Haye, taasi waxay la macno noqon laheyd in dhammaan milkiilayaasha PC-ga leh iPod ay hadda heli doonaan IntelMac oo ay ku midoobi doonaan qaar ka mid ah barnaamijyada Microsoft? Hm…)